Shaqaalaha Radio Hargeysa oo ka cawday Caddaalad-darro iyo Sinnaan la’aan ay ka tirsanayaan Wasiirka Warfaafinta
Home WARARKA Shaqaalaha Radio Hargeysa oo ka cawday Caddaalad-darro iyo Sinnaan la’aan ay ka...
Hargeysa(berberanews):- Shaqaale ka hawlgala Waaxda Idaacadda Radio Hargeysa ee Wasaaradda Warfaafinta Somaliland, ayaa cabasho ka muuqjiyey caddaalad-darro iyo sinnaan la’aan ay sheegeen inay ka tirsanayaan Masuuliyiinta Wasaaradda, gaar ahaan Wasiirka iyo Agaasimaha guud.
Labaatan ka tirsan Shaqaalaha Idaacadda Radio Hargeysa, ayaa War-Saxaafadeed ay magacyadoodu ku saxeexan yihiin oo ay Warbaahinta u qaybiyeen waxay ku sheegeen in ballan-qaadyo kala dambeeyey oo uu u Sameeyey Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse) ay meesha ka baxeen, taasina ay tahay ta ku kalliftay inay cabashadooda u soo gudbiyaan Warbaahinta madaxa-bannaan.
Qoraalka War-Saxaafadeedka ay labaatanka ka tirsan Shaqaalaha Idaacaddu soo saareen, ayaa u dhignaa sidan:- “Annagoo ah shaqaalaha Idaacadda Radio Hargeysa, muddo badanna ka soo shaqaynaynay, ahna Shaqaalihii Imtixaankii shaqaalaha aannu u soo galnay Wasaaradda, isla markaana ka tirsan Shaqaalaha Barmalka ah ee Wasaaradda Warfaafinta Somaliland.
Waxaannu maanta ka cabanaynaa Xuquuqdayadii aannu xaqa u lahayn oo aannaan illaa hadda helin, caddaalad-darro iyo sinaan la’aan shaqaalaha Wasaaradda dhexdiisa ah, oo ay ka mid yihiin: Shaqaale isku giraydh ah (isku derajyo) ah oo haddana kala mushahar badan. Ardaydii ka soo baxday sannadkan Jaamacadaha dalka ee ka tirsanaa shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta oo qaarkood la dallacsiiyey.
Waxaa cabashadayadan keenay, ka dib markii uu fashilmay, shaqaaluhuna ku hungoobay ballan-qaad Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse) shaqaalaha u sameeyey dabayaaqada sannadkii dhammaaday ee 2013-kii, kaasoo uu ku sheegay inaanay jiri doonin sannadka 2014-ka shaqaale isku-giraydh ah oo haddana kala mushahar badan, isla markaana ay heli doonaan wixii ay xaq u leeyihiin.
Sidoo kale, waxa na kallifay ballan-qaadkii uu shaqaale ahaan noo sameeyey Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Cabdirashiid Jibriil Yuusuf oo noo sheegay inay sinnaan iyo caddaalad noo samaynayaan, wixii aannu xaq u leenahayna na siin doono, hase-yeeshee, taasina meesha way ka baxday. Waxaanannu qabnaa oo aannu ka cabanaynaa dulmi badan oo aan marna shaqaale ahaan waxba aanay Masuuliyiinta isu beddelayay Wasaaradda Warfaafintu waxba nooga qaban.
Waxaannu u soo jeedinaynaa Masuuliyiinta cabashadayadu khusayso inay wax ka qabtaan tacaddiga, caddaalad-darrada iyo sinnaan la’aanta hadheeyey Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta Somaliland.”
Magacyada Xubnaha Shaqaalaha Radio Hargeysa ee ku saxeexan War-Saxaafadeedkan, waxay u dhignaayeen sidan:-
1- Idil Maxamed Saleebaan
2- Yaasiim Muuse Xasan
3- Nuura Maxamed Nuur
4- Saynab Maxamed Cabdi
5- Aamina Xasan Cawaale
6- Cabdiwali Saxardiid Xirsi
7- Mubaarik Cabdi Yuusuf
8- Sakariye Axmed Muxumed
9- Cabdiraxmaan Axmed Ibraahin (Bataash)
10- Cabdicasiis Caydiid Cilmi (Yamani)
11- Deeqa Cali Saalax
12- Maxamed Cabdillaahi Cali (Soomaali)
13- Maxamed Saleebaan Muxumed (Gaabane)
14- Nimco Cabdiwahaab Shirdoon
15- Xasan Cali Carraale
16- Xayaad Cali Cumar
17- Ismaaciil Xasan Siciid
18- Cabdirisaaq Xasan Maxamed
19- Salma Cabdillaahi Khadar
20- Cabdillaahi Yuusuf Axmed.
Previous article“Waxaa Xaaraan ah Arday Jaamacad Dhiganeysa Rasaas Loo Aadeegsado Oo Jeelasha Lagu Guro”Guddoomiyaha Madasha Wadatashiga
Next articleCiidamada Asluubta Ee Gobolka Togdheer Oo Toogtay Maxbuus isku dayay inuu baxsado